Baarlamaanka Soomaaliya oo doortay guddoomiye ku-xigeenadiisa - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaBaarlamaanka Soomaaliya oo doortay guddoomiye ku-xigeenadiisa
January 12, 2017 Abdi Omar Bile Somalia 0
Baarlamaanka Soomaaliya oo doortay guddoomiye ku-xigeenadiisa. [Graphic: Puntland Mirror]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta oo Khamiis ah Cabdiweli Shiikh Ibraahim Muudey u doortay guddoomiye ku xigeenka kowaad ee baarlamaanka.
Mr Muudey ayaa helay 164 cod halka Faarax Shiikh Cabdiqaadir oo la loolamayay uu helay 94 cod intii ay socotay wareega labaad ee doorashada, sida uu sheegay guddoomiyaha kumeel gaarka ah ee doorashada.
Xildhibaanada ayaa sidoo kale Mahad Cabdalla Cawad u doortay ku xigeenka labaad kadib markii uu tartan adag kaga adkaaday Cabdiqaadir Shiikh Cali.
Muudey ayaa soo noqday wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada intii ay jirtay xukuumada Madaxweyne Xasan Shiikh Maxamuud, halka Mahad Cabdalla Cawad uu soo noqday guddoomiye ku xigeenka baarlamaankii hore.
Arbacadii shalay, xildhibaanada ayaa dib guddoomiye ugu doortay Maxamed Shiikh Cusmaan oo loo yaqaan (Jawaari).
Si kastoo ay ahaataba, baarlamaanka iyo xubnaha cusub ee aqalka sare ayaa Madaxweynaha xiga ee Soomaaliya dooran doona 28-da bishaan Janaayo, sida qorshuhu yahay.
April 1, 2017 Wasiirka cusub ee wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya oo xafiiska la wareegay
Guddiga doorashada Koonfur Galbeed oo u ogolaaday Mukhtaar Roobow in uu u tartami karo madaxtinimada
Baydhabo-(Puntland Mirror) Guddiga doorashada maamul goboleedka Koonfur Galbeed ayaa u ogolaaday Mukhtaar Roobow Abu Mansuur in uu u tartami karo madaxtinimada maamulkaas, sida ay wararku sheegeen. Roobow Abu Mansuur oo ahaan jiray guddoomiye ku xigeenka [...]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Sargaal katirsan maleeshiyada Al-Shabaab ayaa isku dhiibay ciidamada dowladda Soomaaliya ee ku sugan magaalada Garbahaaray ee gobolka Gedo, sida ilo-wareedyo ciidamada ah ay u xaqiijiyeen warsidaha Puntland Mirror. Sargaalka oo magaciisa la dhaho Adam [...]
Gaalkacyo-(Puntland Mirror) Ciidamada amaanka dowlada Puntland ee (PSF) ayaa gacanta ku dhigay ilaa iyo 10 qof oo looga shaki qabo maleeshiyada al-Shabaab kadib markii ay ciidamada howlgalo gaar ah ka fuliyeen magaalada Gaalkacyo shalay oo [...]